सर्वाधिक धनी व्यक्ति मुकेश अम्बानीबारे राेचक ७ तथ्य – rastriyakhabar.com
सर्वाधिक धनी व्यक्ति मुकेश अम्बानीबारे राेचक ७ तथ्य
भारतका चर्चित उद्योगपति मुकेश अम्बानी चर्चित पत्रिका फोब्र्सको विश्वका सर्वाधिक धनी व्यक्तिमा बर्सेनि अटाउने गर्छन् । भारतको बहुराष्ट्रिय कम्पनी रिलायन्सका निर्देशक अम्बानीको पढाइ, प्रेमजीवन, निजी महलबारे केही तथ्य:
१. घरमै अध्ययन
अम्बानीको बाल्यकाल सामान्य थियो । उनले घरमै अध्ययन गरेका थिए । ‘मेरो अध्ययन घरमै भएको थियो,’ अम्बानी भन्छन् । मुकेश पिता छोराको शैक्षिक र बौद्धिक  विकासबारे चासो देखाउँथे  । सन् १९६० मा अम्बानीका पिताले शिक्षकका लागि एक पत्रिकामा विज्ञापन नै आह्वान  गरेका थिए । शिक्षकले अम्बानीलाई बौद्धिक परीक्षण र सामान्य ज्ञान  पढाउनुपथ्र्यो । बाबुले  घेरै शिक्षकको अन्तर्वार्ता लिए, अन्तमा भारतकै एक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने महेन्द्रभाइ छनोटमा परे  । ‘महेन्द्रभाइ हरेक साँझ आउने गर्थे र हामीसँग साढे ६ बजेदेखि ८ बजेसम्म बस्ने गर्थे । शिक्षकले विभिन्न विषयको ज्ञान दिलाउँथे,’ अम्बानी भन्छन् । महेन्द्रभाइसँग दुई घन्टा निकै रमाइलो हुने गरेको अम्बानी बताउँछन् । कहिलेकाहीँ उनका पिताले महेन्द्रभाइलाई व्यापारका कुरा सुनाउँथे । सोही वेलादेखि नै अम्बानीमा रिलायन्सप्रति मोह बढेको थियो ।
अम्बानीले पितालाई आफ्नो आदर्श व्यक्ति मान्छन् । पिताको प्रभाव आफूमा पनि परेको उनी बताउँछन् । पिताले हरेक आइतबार आफ्नो परिवारका लागि छुट्याउने गर्थे । त्यसैको प्रभावले होला अम्बानी पनि  हरेक आइतबार आफ्नो परिवारसँग बिताउँछन् ।
यात्राका क्रममा डिनर खाँदै गर्दा विमान हल्लिएपछि नीताको हातबाट झरेर बहुमूल्य लुगामा लतपतिन पुग्यो, जसबाट नीता दुःखी भइन् ।  तर, भारतकै धनाढ्यले देख्न सकेनन् र प्लेट बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई विमान ढलपल गर्दा पनि नपोखिने खालको प्लेट निर्माण गर्न फोनबाटै निर्देशन दिए  ।
२. केमिकल इन्जिनियरिङ
अम्बानीलाई सानैदेखि प्राविधिक विषयप्रति सोख  थियो । विद्यालयस्तरको शिक्षापछि आइएस्सी सकेर केमिकल इन्जिनियर पढे । सन् १९७० को दशकमा भारतमा टेक्सटाइल ब्रान्डको लोकप्रियता बढेको थियो । तसर्थ, परिवारले उनी टेक्सटाइल इन्जिनियर बनोस् भन्ने चाहन्थ्यो  । तर, उनी केमिकल इन्जिनियर बने । ‘मेरो निर्णयले परिवार नै आश्चर्य प¥योे,’ उनी भन्छन्, ‘केमिकल रिलायन्सको  भविष्य देखेर मैले केमिकल इन्जिनियरिङ गरेको हँु ।’ अम्बानी केमिकल इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्दा पनि उनी रिलायन्समा पूर्ण रूपमा आबद्ध थिए ।
Photo by: Sandeep Shetty / ISL/ SPORTZPICS
३. भेट भएको दुई महिनामै प्रेमविवाह
प्रेमिका नीतालाई भेटेको डेढ महिनामा नै उनले विवाह प्रस्ताव गरेका थिए । ‘मैले उनलाई नोभेम्बरमा भेटेँ र डिसेम्बरमा प्रस्ताव गरेँ । सो घटना बिर्सनै सक्दिनँ,’ नाटकीय शैलीमा सन् १९८४ को डिसेम्बरमा गरेको प्रेम प्रस्ताबबारे मुकेश भन्छन्, ‘म उनको स्वाभाविक र नम्र बानीबाट प्रभावित भएँ ।’
मुकेश अम्बानीमा तीव्र सोच्न सक्ने क्षमता नभएको भए उनले नीतालाई त्यति छिटो विवाह प्रस्ताव गर्ने थिएनन् ।  नीताको सौन्दर्यले भुतुक्कै भएका थिए मुकेश । छैटौँ भेटमा उनले विवाह प्रस्ताव गरेका थिए । ‘म कुनै हालतमा विवाह गर्ने पक्षमा थिएँ,’ अम्बानी भन्छन् । नीताको हात अरू कसैले लैजान्छ कि भन्ने उनको चिन्ता थियो । ‘मन परेको मानिसलाई टाढा भएको कसले देख्न चाहन्छ र ?’ अम्बानी  भन्छन् । ‘मैले स्नातक सकेर विवाह गरौँला भनेकी थिए, तर अकस्मात् अम्बानीले मलाई फिल्मी शैलीमा विवाह प्रस्ताव गरे,’ पत्नी नीता स्मरण गर्छिन् । तर, उनलाई अहिले मुकेशकी पत्नी भएकोमा गौरव छ ।
४. पत्नीप्रति अनौठो लगाव
एक दिन मुकेश र उनकी पत्नी नीता आफ्नो निजी बोइङ बिजनेस जेट २ विमानमा यात्रा गरिरहेका थिए । यात्राका क्रममा मौसममा अचानक खराबी आयो ।  विमान ढलपलाउन थाल्यो । सो वेला अम्बानी जोडी डिनर गर्दै थियो । तर, विमान यस्तो हल्लियो कि नीताले खाना खाँदै गरेको प्लेट उनको हातबाट झरेर उनको बहुमूल्य लुगामा लतपतिन पुगेछ । यो अवस्था देखेर नीता दुःखी भइन् ।  तर, भारतकै धनाढ्यले पत्नी दुःखी भएको के देख्न सक्थे ? उनले प्लेट बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई विमान ढलपल गर्दा पनि नपोखिने खालको प्लेट निर्माण गर्न फोनबाटै निर्देशन दिए  । अम्बानीकै निर्देशनमा सो कम्पनीले विमानभित्र ढलपल गर्दा वा हल्लाउँदा पनि नपोखिने प्लेट निर्माण गरेको छ ।
५. बर्थडेमा जेट विमान गिफ्ट
अम्बानी परिवारलाई असामान्य महत्व दिन्छन् । परिवारका लागि मनोरञ्जन गर्न हरेक आइतबार समय छुट्याउँछन् । उनलाई  जन्मदिन मनाउन कुनै रुचि छैन । तर, पत्नीले वा परिवारका सदस्यले जन्म दिन मनाउँदा उनलाई खासै आपत्ति छैन । उनले जीवनमा एकपटक मात्र जन्मदिन मनाएका छन् । त्यो पनि पचास वर्षको उमेरमा । श्रीमतीको एक जन्मदिनको अवसरमा अम्बानीले ६२ मिलियन डलर पर्ने जेट विमान उपहार दिएका थिए । ४४औँ जन्मदिनका अवसरमा श्रीमतीलाई दिएको सो जेट विमानमा अत्याधुनिक कार्यालय, स्याटलाइट टेलिभिजन, वाइफाइको पहँुचलगायत अन्य अत्याधुनिक सुविधा छन् । विश्वकै खर्बपति अम्बानीलाई गहना लगाउन खासै सोख छैन ।
६. गगनचुम्बी महल
अम्बानीको २७ तले महलको सर्वत्र चर्चा हुने गर्छ । २ अर्ब अमेरिकी डलर मूल्यबराबरको उनको सो महलमा एउटा बलरुम, तीनवटा हेलिप्याड र एउटा स्विमिङ पुल रहेको छ । यो विश्वकै सर्वाधिक महँगो निजी आवास हो । एउटा पौराणिक टापु एन्टिलिअ नाम दिइएको सो भवन मुम्बईस्थित प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमा पर्छ । सो आवासमा १ सय ६८ वटा कार अट्ने एउटा ग्यारेज, एउटा स्वतन्त्र हेल्थ क्लब, सिनेमाहल छन् । ४ लाख स्क्वायरफिट क्षेत्रफलमा फैलिएको घरको हेरचाहका लागि मात्र ६ सयजना कर्मचारी छन् ।
महलका हरेक तलामा ढोकाबाहिर बगैँचा छ । महललाई लिएर विभन्न आलोचनासमेत गरेको पाइन्छ । खासगरी लाखौँ चरम गरिबीको चपेटामा रहेको सो सहरमा अम्बानी महल आफैँमा व्यंग्य भएको विरोधीको भनाइ छ । सन् २००५ मा निर्माणकार्य सुरु गरिएको सो भवनको निर्माण सन् २०१० मा सम्पन्न भएको थियो । स्टर्लिङ इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले निर्माण गरेको भवनमा नौवटा लिफ्ट छन् ।
७. बहुआयामिक पहिचान
अम्बानीको बहुआयामिक पहिचान छ । उनी  भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी रिलायन्स इन्डिस्ट्रिज लिमिटेड (आरआइएल) का  निर्देशक हुन् । मुम्बईमा कार्यालय रहेको आरआइएलमा उनको ४४ दशमलव ७ प्रतिशत लगानी  छ ।  उनी फोब्र्स पत्रिकाको विश्वका धनाढ्य व्यक्तिको सूचीमा बर्सेनि पर्छन् । फर्चुन म्यागेजिनको १३आैँ शक्तिशाली व्यक्तिको सूचीमा रहेका अम्बानी बैंक अफ अमेरिका कर्पोरेसन, काउन्सिल अन फरिजन रिलेसनको अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाहकार बोर्डको सदस्य हुन् । त्यसैगरी, उनी इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट बेंग्लोरका अध्यक्ष हुन् । सन् १९८१ मा रेलियन्समा आबद्ध  अम्बानीले रेलियन्स
इन्डस्ट्रिजलाई सफलताको शिखरमा पु¥याउन निकै मिहिनेत गरेका थिए साभार नयाँ पत्रिका
आइतवार, कार्तिक २६, २०७४ मा प्रकाशित